Pps စက်မှု Filter ကို Filter ကို Bag
Botou Hengrui Environmental Protection Equipment Co. Ltd. [Hebei,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား: Manufacturer Main Mark: Worldwide ထုတ်ကုန်: 61% - 70%
စိုစွတ်သော electrostatic မိုးရွာသွန်းမှု
ကြယ်ပွင့်အမျိုးအစား Ash ကိုကယ်ဆယ်ရေး Valve
ဖုန်မှုန့်ကောက်ခံရေး Bag ကေ့
Pulverized ကျောက်မီးသွေး Burner
စက်မှု valve >
soft အထိမ်းအမှတ်တံဆိပ်ဂိတ် Valve
soft ချိတ်ပိတ် Butterfly က Valve
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > Pps စက်မှု Filter ကို Filter ကို Bag(24 များအတွက်စုစုပေါင်း Pps စက်မှု Filter ကို Filter ကို Bag ထုတ်ကုန်များ)
Pulverized ကျောက်မီးသွေး Burner
ဆက်သွယ်ရန်ပုဂ္ဂိုလ်: Mr. Liuhuabing
Pps စက်မှု Filter ကို Filter ကို Bag - တရုတ်ထံမှထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း
ကျနော်တို့တရုတ်ထံမှ Pps စက်မှု Filter ကို Filter ကို Bag ထုတ်လုပ်သူ & ပေးသွင်း / စက်ရုံအထူးပြုနေကြသည်။ အရည်အသွေးမြင့်မားအဖြစ်အနိမ့်သောစျေးနှုန်းနှင့်အတူလက်ကား Pps စက်မှု Filter ကို Filter ကို Bag / စျေးပေါ, တရုတ်ထံမှအမှတ်တံဆိပ်ဦးဆောင်သည့် Pps စက်မှု Filter ကို Filter ကို Bag များထဲမှ Botou Hengrui Environmental Protection Equipment Co. Ltd. ။
polyester သွေးခုန်နှုန်းဂျက် filter ကိုအိတ်
min ။ အမိန့်: 100 Piece/Pieces
tag ကို: PPS စက်မှု Filter ကို Filter ကို Bag , ရေစိုခံခြင်းနှင့်ရေနံတွန်းလှန် Filter ကို Bag , ဖေယက် Bag
အဆိုပါဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်ဖန်ဖိုင်ဘာ filter ကိုထည်၏လျှောက်လွှာ စဉ်ဆက်မပြတ်ဖန်ဖိုင်ဘာ filter ကိုအထည်ပြန်ရစ်ကြည့်ခြင်းနှင့် warping ၏လုပ်ငန်းစဉ်မှတဆင့်ယက်ထားတဲ့ပတ်ပတ်လည်နှင့်အပြိုင်ဖန်ဖိုင်ဘာပိုက်ဆန်လျှော်၏လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။...
venturi နှင့်အတူသံမဏိဖုန်မှုန့် filter ကိုအိတ်လှောင်အိမ်
tag ကို: Organosilicon အင်္ကျီကို Filter ကို Bag , သံမဏိ Filter ကို Bag , silicone ရေမှုံရေမွှား Filter ကိုအိတ်ထိန်းသိမ်းထား
နိဒါန်းနဲ့ multi ပူးတွဲအရိုးစု၏ရှင်းပြချက် အဆိုပါပေါင်းစုံပူးတွဲ frame ကိုမြေမှုန့်ဖယ်ရှားရေး filter ကိုအိတ်၏နံရိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာတပ်ဆင်ခြင်းနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းတို့အတွက်အလင်းနှင့်အဆင်ပြေဖြစ်သင့်သည်။ အဆိုပါ filter...
သံမဏိ filter ကိုအိတ်ထောက်ခံမှုလှောင်အိမ်
tag ကို: coated ဆီလီကွန် Filter ကိုအိတ်ပံ့ပိုးမှု , ကာဗွန်သံမဏိပံ့ပိုးမှု Filter ကို Bag , သံမဏိဖုန် Bag ကေ့ Filter
မြေမှုန့်အရိုးစု၏ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်ဖွဲ့စည်းပုံတစ်ခုအကျဉ်းမိတ်ဆက် မြေမှုန့်အရိုးစုအားကြီးသောဂဟေဆော်ခြင်းနှင့်ချောမွေ့စွာနှင့်ဖြောင့်သဏ္ဌာန်အားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာသောအထူးကိရိယာများနှင့်အတူ welding တစ်ကြိမ်ကဖွဲ့စည်းသည်။ မြေမှုန့်အရိုးစုဟာ filter...
Organosilicon အင်္ကျီကိုသံမဏိ Filter ကိုကေ့
tag ကို: အိတ်များအတွက်အားပေးမှုဖြစ်စေခဲ့ပြီး Venturi Tube , အိတ်ဖုန်ကောက်ခံရေးများအတွက် Frame က , Venturi Bag မူဘောင်
ဝန်ဆောင်မှုဘဝ မြေမှုန့်အရိုးစုဟာ filter ကိုအိတ်၏နံရိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာတပ်ဆင်ရန်နှင့်ထိန်းသိမ်းရန်အလင်းနှင့်လွယ်ကူသောဖြစ်သင့်သည်။ frame ရဲ့အရည်အသွေးကိုတိုက်ရိုက် filter ကိုအိတ်၏ filtering ကိုပြည်နယ်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုဘဝသက်ရောက်သည်။...
နွေဦးဖုန်ကောက်ခံရေး Bag ကေ့
tag ကို: နွေဦးဖုန်မှုန့်အိတ်ကေ့ , Dedusting ကေ့အရိုးကိုလေပေါ်မှာပ , ဖုန်မှုန့်အိတ် Frame ကလေပေါ်မှာ
ဖုန်မှုန့်စုဆောင်းအရိုးစု မြေမှုန့်စုဆောင်း (ဖုန်မှုန့်စုဆောင်းအိတ်လှောင်အိမ်, duster Keel နှင့်ဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားရေးဘောင်) ၏အရိုးစုအိတ် filter ကို (အိတ်ဖုန်မှုန့်စုဆောင်း) ၏အဓိကဆက်စပ်ပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာသာမန်အထည်အိတ်၏နံရိုးအဖြစ်လူသိများသည်။...
Trapezoidal ဖုန်ကောက်ခံရေး Bag ကေ့
tag ကို: နွေဦးဖုန်မှုန့်အိတ် Frame က , နွေဦးဖုန်မှုန့်ကေ့အရိုး , Trapezoid ဖုန်မှုန့်အိတ်ကေ့
မြေမှုန့်စုဆောင်း၏အရိုးစု၏တစ်ဦးကအကျဉ်းချုပ် မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်းဂဟေဆော်လုပ်ငန်း၏ပထမဦးဆုံး welding အရိုးစုကိုအသုံးပြုသည်။ သံဝါယာကြိုးသို့မဟုတ်လုံလောက်သောခွန်အားနှင့်သံမဏိနှင့်အတူသံမဏိဝါယာကြိုး။ , အားပေးမှုဖြစ်စေခဲ့ပြီးဖျန်းနှင့် organosilicon...
မြင့်မားသောအပူချိန်ကိုခံနိုင်ရည် dedusting အရိုးစု
tag ကို: Venturi tubular လေ့လာကြရအောင် , စတား Angle Dedusting လေ့လာကြရအောင် , လေ့လာကြရအောင်ဖယ်ရှားခြင်းမြို့ပတ်ရထား Bag အမျိုးအစားဖုန်
အဆိုပါ duster Keel ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုထိခိုက်စေအချက်များ (1) မြေမှုန့်စုဆောင်း၏အရိုးစု၏အရွယ်အစား၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု: မြေမှုန့်ဖယ်ရှားရေးအရိုးစုများ၏ဂျီဩမေတြီအရွယ်အစား, မြေမှုန့်အရိုးစု,...
ကာဗွန်သံမဏိ Air ကိုအစိတ်အပိုင်းများ Venturi Filter
tag ကို: ကာဗွန်သံမဏိ Filter ကိုအိတ်အရိုးကေ့ , ကာဗွန်သံမဏိဖုန်မှုန့်အိတ်ကေ့ , Organosilicon အင်္ကျီကိုဖုန်ကေ့
မြေမှုန့်ဖယ်ရှားရေးမူဘောင်၏အောက်ဆုံးယေဘုယျအားဖြင့်မြေမှုန့်ဖယ်ရှားရေးမူဘောင်နှင့် တွဲဖက်. အသုံးပြုသည်နှင့်ဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားရေးအထည်အိတ်သို့မဟုတ်မြေမှုန့်ဖယ်ရှားရေး filter ကိုအိတ်ကိုပြုပြင်တာတွေများအတွက်အသုံးပြုသည်။...
အိတ်စစ်ထုတ်ကိရိယာများအတွက်ကာဗွန်သံမဏိ filter ကို filter ကို
tag ကို: ဒေါင်လိုက် Bag အိတ်ကေ့ Filter , သွပ်ရည်စိမ်ဖုန်အိတ်၏ filter , ဖုန်ကောက်ခံရေးများအတွက် flat Bag
လည်းမြေမှုန့်အိတ်လှောင်အိမ်အဖြစ်လူသိများဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားရေးဘောင်, အဖြစ်လူသိများဖုန်မှုန့်အရိုးစု, အထူးပစ္စည်းကိရိယာဂဟေဆော်ခြင်းဖြင့်ဖွဲ့စည်းသည်။ အဆိုပါအရိုးစုမြေမှုန့် filter ကိုအိတ်၏နံရိုးဖြစ်ပါတယ်။ အိတ်လှောင်အိမ်၏အရည်အသွေးတိုက်ရိုက် filter...
Organosilicon Venturi သံမဏိ Bag Filter ကိုကေ့
tag ကို: Organosilicon ရေမှုံရေမွှား Filter ကို Bag , silicone coated Dustproof Bag , ဖုန်မှုန့်ကောက်ခံရေးကေ့အရိုး
ခန္ဓာကိုယ်၏ဖွဲ့စည်းပုံဆက်သွယ်မှုရေယိုစိမ့်မရှိ, မြေမှုန့်အရိုးစု၏ဘုံချို့ယွင်းချက်အောင်မြင်သောသေချာဖို့ချုပ်ရိုးမှာခွက်နှင့်ခုံးအဆစ်တစ်ဦးချင်းစီပူးတွဲမှာများနှင့် furan စေးသို့မဟုတ်အက်ဆစ်အယ်လကာလီကော်ရွှံ့တွေနဲ့အပိုင်းနှုန်း 1 မီတာဖြစ်ပါသည်...
welding Dedusting Filter ကိုအိတ်ကေ့
tag ကို: ဘဲဥပုံ Air ကို Cleaner ဖုန်ကောက်ခံရေး , ချောမွေ့ Flat Air ကိုသံမဏိ Filter ကိုကေ့ , Organosilicon ပစ္စည်း Filter ကိုကေ့
အဆိုပါအပြင်ပန်းမြင့်မားသောခွန်အားကိုမြင့်မားတဲ့အပူချိန်, အက်ဆစ်နှင့်အယ်လကာလီခံနိုင်ရည်ပစ္စည်းများနှင့်အတူလှဲချသည်။ ယင်းဆလင်ဒါကိရိယာများ၏အပြင်ဘက်၌အကာအကွယ်သံမဏိပန်းကန်ကိရိယာများ၏အစွမ်းသတ္တိ, ဝန်ဆောင်မှုဘဝသည်အလွန်တိုးတက်လာခဲ့ပါသည်။...
Organosilicon Blowout Duster Bag
tag ကို: မြင့်မားသောအပူချိန် Dedusting Bag , Venturi ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ၏အိတ် Filter , အိတ် Filter ကိုကေ့စုဆောင်းခြင်းကိုလေပေါ်မှာပ
ဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားရေးအရိုးစု၏ filter ကိုမြေမှုန့်ဖယ်ရှားရေးနိယာမအားသုံးသပ်ခြင်း ကြီးမားသောဖိုင်ဘာအကြောင်းအရာနှင့်အတူမြေမှုန့်မှုန့်ကိုဖယ်ရှားယန္တရားဘုံမြေမှုန့်ထဲကနေကွဲပြားခြားနားသည်။ ဖုန်မှုန့် remover...
ကြယ်ပွင့်ပုံသွင်း Filter ကိုအိတ် Venturi ကေ့
tag ကို: ကာဗွန်သံမဏိဖုန် Filter ကို Bag , silicone ရေမှုံရေမွှား Filter ကို Bag , filter ကေ့ filter ကေ့
(1) ဖုန်မှုန့်တောင်းကိုဖုန်မှုန့်လှောင်အိမ် filter ကိုလှောင်အိမ်သတ္တု Grid ကဝိုင်းတစ်ဆလင်ဒါဖြစ်ပြီး, ဆလင်ဒါကြီးစွန်းတိုင်အောင်လေ channel တစ်ခုနဲ့ဆက်သွယ်နေကြသည်။...
ဖုန်စုပ်စက်များအတွက် Bag ကေ့ Filter
tag ကို: Chuck အမျိုးအစားလေ့လာကြရအောင် Filter ကို Bag , ဘိလပ်မြေစက်ရုံအတွက် filter ကေ့ , အထူးသံမဏိ Bag ကေ့ဖုန် Filter ကို
အဆိုပါ filter အိတ်ထည်၏တစ်ခုတည်းသောအလွှာများကဝိုင်းရံနေတဲ့ဆလင်ဒါကိုယ်ဖြစ်၏။ ဒါဟာပုံမှန်အားဖြင့်လှည့်လည်ခြင်းနှင့်ရိုးရှင်းသောဖွဲ့စည်းပုံမှာလွယ်ကူသန့်ရှင်းရေးအားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။ ဖုန်ထူလေကြောင်းအတွက် filter ကိုအိတ်ဖြတ်သန်းသောအခါ,...
စက်မှုဇုန်ဘိလပ်မြေ grinder များအတွက် filter လှောင်အိမ်
tag ကို: Venturi ဖုန်ကောက်ခံရေး Frame က , flat သွပ်ရည်စိမ် Filter ကို Net ကကေ့ , flat Bag ဖုန် Bag ကေ့
ဖုန်မှုန့်တောင်းကိုဖုန်မှုန့်လှောင်အိမ် filter ကိုလှောင်အိမ်သတ္တု Grid ကဝိုင်းတစ်ဦးမြို့ပတ်ရထားဆလင်ဒါဖြစ်ပြီး, ဆလင်ဒါနှစ်ခုစွန်းတိုင်အောင်လေ channel တစ်ခုနဲ့ဆက်သွယ်နေကြသည်။...
filter ကိုအိတ်ထောက်ခံမှုများအတွက် filter ဖုန်မှုန့်လှောင်အိမ်
tag ကို: ကာဗွန်သံမဏိစတား Bag ကေ့အရိုး , Venturi Bag ပံ့ပိုးမှု Filter ကိုကေ့ , Venturi Bag ကေ့အရိုး Filter
ဇင့် dedusting အရိုးစု သွပ်ရည်စိမ်အရိုးစု၏ဗေဒအချက်များအဘို့, ဖောက်သည်လိုအပ်ချက်တွေနဲ့အညီကွဲပြားခြားနားသောသတ်မှတ်ချက်များနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောမျက်နှာပြင်ကုသမှုမှစိတ်ကြိုက်နိုင်သည့်သွပ်ရည်စိမ်ဖုန်မှုန့်အရိုးစု, ဘုံ galvanizing နှင့်အရောင်သွပ်ရည်စိမ်,...
တစ်အိတ် filter ကို၏ organosilicon အရိုးစု
tag ကို: စက်မှု Filter ကိုအိတ်ထိန်းသိမ်းထား , Spliced ​​လေ့လာကြရအောင် Filter ကိုကေ့ , flat Bag Filter ကိုအိတ်နွေ Frame က
ကုန်ပစ္စည်း features တွေ ဒါဟာတဦးတည်းအချိန်မရွေးသွပ်ရည်စိမ်သံမဏိလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ filter ကိုအိတ်ပျက်စီးသွားသောမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မျက်နှာပြင်, burr မရှိဘဲချောမွေ့နှင့်ဖြောင့်သည်။ ဂဟေဖွဲ့စည်းပုံကျိုးကြောင်းဆီလျော်ဖြစ်တယ်, ယူနီဖောင်းဖြစ်ပါသည်,...
Organosilicon ကုသမှု filter ကိုအိတ်ထောက်ခံမှုလှောင်အိမ်
tag ကို: ဘိလပ်မြေစက်ရုံများအတွက် Bag စုဆောင်းခြင်းမြေမှုန့် , မြို့ပတ်ရထားပလတ်စတစ်ပလတ်စတစ်အိတ်ကေ့ , Venturi စက်မှုဖုန် Bag ကေ့
နည်းပညာဆိုင်ရာအသုံးအနှုန်းများ အရိုးစုအရှည်: အောက်ဆုံး၏အောက်ခြေနှင့်ပန်းပွင့်ပန်းကန်နှင့်အဖုံး၏အောက်ခြေအကြားအကွာအဝေး။ အရိုးစုခေါင်းကို: အရိုးစုအပေါ်အပွင့်ပန်းကန်နဲ့တိုက်ရိုက်ထိတွေ့။ အရိုးစုဦးခေါင်းအချင်း: အရိုးစုခေါင်း filter...
မြို့ပတ်ရထား organosilicon အင်္ကျီကိုမြေမှုန့်စုဆောင်း
tag ကို: Organosilicon Coating Filter ကိုအိတ် Filter ကိုကေ့ , စက်ရုံများအတွက် Bag ကေ့အရိုး Filter , High Quality Filter ကိုအိတ် Filter ကိုကေ့
ဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားရေးအရိုးစု: အမြို့ပတ်ရထားအိတ်ဘောင် (ပြင် filter ကိုအမျိုးအစား) ကိုစစ်ထုတ်အိတ်၏နံရိုးနှိုင်းယှဉ်နေပါတယ်။ ဒါဟာတပ်ဆင်ရန်နှင့်ထိန်းသိမ်းရန်အသေးစားနှင့်လွယ်ကူပါတယ်။ frame ရဲ့အရည်အသွေးကိုတိုက်ရိုက် filter...
custom သံမဏိ filter ကိုအိတ် filter ကိုလှောင်အိမ်
tag ကို: စက်မှု Organosilicon 3.5mm Filter ကိုကေ့အိတ် , Organosilicon Air ကို Filter ကိုကေ့အရိုး , ဂဟေဆော်ခြင်းစက်ရုံ၏မြေမှုန့်ကောက်ခံရေးလေ့လာကြရအောင်
သငျသညျမွမှေုနျ့ကိုစုဆောင်း၏အရိုးစုပြရန် တစ်မြေမှုန့်စုဆောင်း၏အရိုးစု၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုထိခိုက်စေအချက်များ (1) မြေမှုန့်စုဆောင်း၏အရိုးစု၏အရွယ်အစား၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု: မြေမှုန့်ဖယ်ရှားရေးအရိုးစုများ၏ဂျီဩမေတြီအရွယ်အစား, မြေမှုန့်အရိုးစု,...
စက်မှုထုံးစံသံမဏိ filter ကိုအိတ် filter ကိုလှောင်အိမ်
tag ကို: Organosilicon 3.5mm Filter ကိုကေ့အိတ် , Organosilicon Stardust Air ကို Filter ကိုမှုတ်ဆေးဘူး , ဂဟေဆော်ခြင်းစက်ရုံအတွက်လှောင်အိမ်အရိုး
အဆိုပါ venturi ဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားရေးမူဘောင်အထူးဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားရေးမူဘောင်သောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်, venturi ပြွန်, မူရင်းဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားရေးမူဘောင်ထည့်သွင်းသည်။ Venturi ပြွန်ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်ကအလွန်အစွမ်းထက်သည်။...
Organosilicon venturi ပြွန်ပူလေကြောင်း filter ကိုလှောင်အိမ်
tag ကို: 12 ကြေးနန်းပံ့ပိုးမှု Filter ကိုအိတ်ထိန်းသိမ်းထား , စက်မှုဆီလီကွန် Filter ကို Bag , ဖုန်မှုန့်အိတ် Frame က
venturi ပြွန်နှင့်အတူအရိုးစုသံမဏိ dusting ၏ဖွဲ့စည်းပုံမှာအောင်နှင့်တပ်ဆင်၏ဖြစ်စဉ်ကိုကွဲပြားခြားနားသောဂုဏ်သတ္တိများနှင့်စစ်ဆင်ရေးနှင့်အတူလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာစံအလျားလိုက်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ထွက်သယ်ဆောင်နှင့် လုပ်....
115x2000 မီလီမီတာဖုန်မှုန့်စုဆောင်း filter ကိုလှောင်အိမ်
tag ကို: Organosilicon အင်္ကျီကိုဖုန် Filter ကို Bag , ချေးစက်မှု Filter ကိုကေ့ , High Quality Venturi Bag Filter ကို
အိတ်စစ်ထုတ်ကိရိယာများအတွက် filter ကိုအိတ်မူဘောင်၏အဓိကလိုအပ်ချက်နေသောခေါင်းစဉ်: 1), အားလုံးဂဟေဆက်အဆစ်ကုမ္ပဏီတခုဖြစ်ရပါမည်, dissoldered welded နှင့် welded ခံရဖို့ခွင့်မပြု; မြေမှုန့်အရိုးစုများနှင့် filter ကိုအိတ်၏မျက်နှာပြင်ချောမွေ့ဖြစ်သင့်,...
စက်မှု Silicon Surface က Filter ကိုအိတ်ကေ့
tag ကို: အိတ် Deduster ပံ့ပိုးမှုကေ့ Filter , High Quality ဖုန် Bag ကေ့အရိုး , High Quality Filter ကိုအိတ်ကေ့
မြို့ပတ်ရထားအရိုးစု, trapezoidal မူဘောင်များနှင့်နွေဦးအရိုးစု: အသုံးများသောဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားရေးမူဘောင်အမျိုးအစားများကိုယေဘုယျအားဖြင့်ခွဲခြားထားပါသည်။ ဖုန်မှုန့်စုဆောင်းအရိုးစုသုံးခုမျိုး၏မျက်နှာပြင် anticorrosion...
polyester သွေးခုန်နှုန်းဂျက် filter ကိုအိတ် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
venturi နှင့်အတူသံမဏိဖုန်မှုန့် filter ကိုအိတ်လှောင်အိမ် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
သံမဏိ filter ကိုအိတ်ထောက်ခံမှုလှောင်အိမ် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Organosilicon အင်္ကျီကိုသံမဏိ Filter ကိုကေ့ အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
နွေဦးဖုန်ကောက်ခံရေး Bag ကေ့ အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Trapezoidal ဖုန်ကောက်ခံရေး Bag ကေ့ အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
မြင့်မားသောအပူချိန်ကိုခံနိုင်ရည် dedusting အရိုးစု အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ကာဗွန်သံမဏိ Air ကိုအစိတ်အပိုင်းများ Venturi Filter အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အိတ်စစ်ထုတ်ကိရိယာများအတွက်ကာဗွန်သံမဏိ filter ကို filter ကို အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Organosilicon Venturi သံမဏိ Bag Filter ကိုကေ့ အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
welding Dedusting Filter ကိုအိတ်ကေ့ အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Organosilicon Blowout Duster Bag အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ကြယ်ပွင့်ပုံသွင်း Filter ကိုအိတ် Venturi ကေ့ အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ဖုန်စုပ်စက်များအတွက် Bag ကေ့ Filter အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
စက်မှုဇုန်ဘိလပ်မြေ grinder များအတွက် filter လှောင်အိမ် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
filter ကိုအိတ်ထောက်ခံမှုများအတွက် filter ဖုန်မှုန့်လှောင်အိမ် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
တစ်အိတ် filter ကို၏ organosilicon အရိုးစု အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Organosilicon ကုသမှု filter ကိုအိတ်ထောက်ခံမှုလှောင်အိမ် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
မြို့ပတ်ရထား organosilicon အင်္ကျီကိုမြေမှုန့်စုဆောင်း အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
custom သံမဏိ filter ကိုအိတ် filter ကိုလှောင်အိမ် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
စက်မှုထုံးစံသံမဏိ filter ကိုအိတ် filter ကိုလှောင်အိမ် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Organosilicon venturi ပြွန်ပူလေကြောင်း filter ကိုလှောင်အိမ် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
115x2000 မီလီမီတာဖုန်မှုန့်စုဆောင်း filter ကိုလှောင်အိမ် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
စက်မှု Silicon Surface က Filter ကိုအိတ်ကေ့ အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Wholesale Pps စက်မှု Filter ကို Filter ကို Bag from China, Need to find cheap Pps စက်မှု Filter ကို Filter ကို Bag as low price but leading manufacturers. Just find high-quality brands on Pps စက်မှု Filter ကို Filter ကို Bag produce factory, You can also feedback about what you want, start saving and explore our Pps စက်မှု Filter ကို Filter ကို Bag, We'll reply you in fastest.
ZC စက်မှု rotary ပြားချပ်ချပ်အိတ်အမျိုးအစားမြေမှုန့်စုဆောင်း အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
electrodynamic အမျိုးအစား YJD-တစ်ဦးကကြယ်ပွင့်အမျိုးအစားပြာကယ်ဆယ်ရေးအဆို့ရှင် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
စက်မှုဇုန်ပူလေကြောင်းများအတွက် centrifugal ဆိုင်ကလုန်းဖုန်မှုန့် remover အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ဆက်စပ်ထုတ်ကုန်များစာရင်း: စက်မှုဖုန်ကောက်ခံရေး , သံမဏိဖုန်ကောက်ခံရေး , ဖုန်မှုန့်ကောက်ခံရေး Fittings , အိတ်စုဆောင်းခြင်းမြေမှုန့် , စက်မှု Valve , Pulverized ကျောက်မီးသွေး burner , သွေးခုန်နှုန်းဂျက်ဖုန်ကောက်ခံရေး , အိတ်အမျိုးအစားဖုန်ကောက်ခံရေး
မူပိုင်ခွင့်© 2020 Botou Hengrui Environmental Protection Equipment Co. Ltd. All rights reserved ။